National security — အမျိုးသားလုံခြုံရေး – Free Expression Myanmar
Feb 17, 2017 by Coordinator	in International standards စံချိန်စံညွှန်းများ
UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Siracusa Principles, Principle B(iv) defines whenarestriction can be said to serve national security:
National security cannot be used asapretext for imposing vague or arbitrary limitations and may only be invoked when there exists adequate safeguards and effective remedies against abuse.
A state responsible for systematic violation of human right shall not invoke national security asajustification for measures aimed at suppressing opposition to such violation or at perpetrating repressive practices against its population.
Very often, national security/public order and safety restrictions are impermissibly vague or respond to statements which pose onlyahypothetical risk of harm
Often courts are prevented from assessing the rationale of the authority’s decision aiming at protection of public order or public safety or national security.
The Tshwane Principles provide that there should beapresumption of overriding interest in favour of disclosure of information relating to the following:
violations of international human rights and humanitarian law;
deprivation of life or liberty or torture;
structure and powers of government;
decisions to use military force or acquire weapons of mass destruction;
overall legal framework concerning surveillance;
financial information concerning state budget or procurement;
existence and scale of abuses of power by public authorities,
imminent or actual threat to public health, safety and environment.
Sometimes people call to overthrow government or for insurrections. It may be legitimate to restrict such statements for the protection of public order or safety. Normally the key issue to examine is whether
the statements were made with intent to cause harm to public order/public safety, and
there isaclear nexus between the statement and the likelihood of this harm occurring.
The Johannesburg Principles says that the expression may be punished only if the government can demonstrate that:
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ၏ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်လူနည်းစုများကာကွယ်ရေးဆပ်ကော်မတီကအမျိုးသားလံခြုံရေး ဟူသောဝေါဟာရကို သူ၏ ဆိုင်ရာကျူစည်းမျဉ်းဖြင့် ရှင်းလင်းရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ သည်။ ထိုစည်းမျဉ်းအပိုဒ် B(iv) တွင် ဖွင့်ဆိုထားသည်မှာအောက်ပါအချက်များသည် အမျိုးသားလုံခြံုရေးကိုအကျိုးပြုသည့်ကန့်သတ်ချက်များဖြစ်သည် ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်-
ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအရအမျိုးသားလုံခြံုရေးပေါ်တွင်အခြေခံသောကန့်သတ်တားဆီ ချက် မှုများသည် သာမန်ရာဇဝတ်မှုများနှင့်ကွဲပြားနားသော နိုင်ငံတည်တံံ့ရေး၊နယ်မြေစိုးမိုးခိုင်မာရေးသို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်များကိုခြိမ်းခြောက်မှုများအားရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းနိုင်မှသာလျှင် တရားမျှ တသောကန့်သတ်တားဆီး ပိတ်ပင်မှုများအဖြစ်မှတ်ယူနို်င်သည်။
အများပြည်သူငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးဆိုသည်မှာလူ့ဖွဲ့အ စည်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုအာမခံသောစညး်မျဉ်းအစုအပေါင်းပင်ဖြစ်သည်၊သို့မဟုတ် လူ့အဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်ထားသည့် အခြေခံစည်းမျဉ်းများပင် ဖြစ်သည်။
အများပြည်သူလံခြုံစိတ်ချရေးဆိုသည်မှာလူများ၏လုံ ခြံုရေး။ အသက် စည်းစိမ်အိုးအိ်မ်များ၏အန္တာရာယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းမည်ပေသည်။
အများပြည်သူလုံခြံုရေးနှင့်အမျိုးသာလုံခြံုရေးများကိုအကြောင်းပြု၍လွတ်လပ်စွာဖေါ်ထုတ်ပြောဆိုခြင်းကို ကန့်သတ်နိုင်သောဥပမာများမှာ- အမျိုးသားလုံခြံုရေး၊အများပြည်သူလုံခြံုစိ်တ်ချရေးနှင့် အများ ပြည်သူငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခြင်းတို့ ထိတွေ့ ရင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပွားခြင်းများမှာသတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားကိုခွဲခြားသောဥပဒေနှင့် စစ်ဖက် ဆိုင်ရာ၊ပုန်ကန်ထကြွရန်နှင့် အစိုးရကိုဖြတ်ချရန်ရည်ရွယ်သောသတင်းအချက် အလက် များကို ဖြန့်ချီ ခြင်းကိုတားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းတို့နှင့်ဆိုင်သောဥပဒေများပင်ဖြစ်သည် ။
မကြာခဏဆိုသလ်ိုပင်၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေး၊အများပြည်သူငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးနှင့် လုံခြံုရေးကန့်သတ်ချက်များသည် ခွင့်မလွှတ်နိုင်အောင်သိသာမြင်သာမှုကင်းခြင်းသို့မဟုတ် အန္တာရာယ်ဖြစ် နိုင်ချေကိုတုံ့ပြန်သောအချက်များဖြစ်နေတတ်ပြီး အစိုးရအားဝေဖန်မှုများကိုတားဆီး ရာတွင်သုံးသောကိရိယာများဖြစ်နေတတ်သည်။
တရားရုံးများအားမကြာခဏဆိုသလိုအာဏာပို််င်များ၏အမျိုးသားလုံခြံုရေး၊ အများပြည်သူ ငြိမ်ဝပ် ပိပြားရေးနှင့်လုံခြံုရေးကန့်သတ်ချက်များကိုကာကွယ်မည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသုံးသပ်ချက် မပြုလုပ်ရန်တားမြစ်ခံရသည်။ဥပမာ- ဥပဒေသည်တရားရုံးအား သတင်းအချက်အလက်များ ကိုအမျိုးအစားခွဲခြားခြငး်အားအကဲဖြတ်ခွင့်ပေးမထားချေ၊ သို့ဖြစ်သောကြောင့် အစိုးရများသည် အမျိုးသားလုံခြံုရေး၊အများပြည်သူတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုလွယ်ကူစွာအကြောင်းပြု၍ ၄င်းတို့၏ အပြုအမူများအတွက်အများပြည်သူ၏ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဝေဖန်သုံးသပ်မှုများမှကင်းလွတ်အောင် ဆောင် ရွက်နိုင်ကြသည်။
တရွှာနီစည်းမျဉ်းအရ အောက်ပါ အချက်များနှင့် ဆက်စပ်သော အခြေအနေတွင် မြင့်မားသောလူထုအကျိုးစီးပွား ယုံကြည်ချက်ကို ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။
၂။ လွတ်လပ်မှု သို့မဟုတ်လူ့ဘဝကို နှုတ်ပယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ညှင်းပန်းနှိုပ်စက်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်
၃။ အစိုးရတည်ဆောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အာဏာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ
၄။ စစ်အင်အားကိုအသုံးချရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ် အစုအပြုံလိုက် ထိခိုက်စေသော လက်နက်ရယူခြင်း
၆။ နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်နှင့်သက်ဆိုင်သောငွေကြေးဆိုင်ရာသတင်း အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် စာရင်းစစ်ချုပ်တင်သွင်းသောအစီရင်ခံစာ
၈။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိ်မ်းရေး၊ လုံခြံုရေးနှင့် ကျန်းမာရေးတို့နှင် ့ပတ်သက်ပြီးအန္တရာယ်ရှိနိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များကို လူထုနားလည် သဘောပေါက်စေနိုင်စေသည့် သတင်း အချက်အလက်များ။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် လူတို့သည်အစိုးရကိုဖြုတ်ချရန် သို့မဟုတ်ပုန်ကန်၊သူပုန်ထရန် စုစည်း ကြ သည်။ ယင်းကိုပြည်သူလူထုတည်ငြိ်မ်အေးချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစေရေးအတွက် ထိုသို့သော ထုတ်ဖေါ်မှု မျိုးများကိုတရားဝင်ကန့်သတ်ခြင်းသည်တရားဝင် ဖြစ်နိုင် ပေသည်။ ပုံမှန် အားဖြင့် စီစစ်သောအဓိကပြဿနာသည် (၁) ဖွင့်ဆိုတင်ပြမှုသည် ပြည်သူလူထုတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်စိတ်ချလုံခြံုရေးကိုပျက်ပြားစေရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းရှိမရှိ၊
ဂျိုဟန် နက်စဘာ့ မူအရထို “ရည်ရွယ်ချက်”နှင့် “ဆက်စပ်မှု” တို့အား အကျဉ်းချုပ်ပြထားသည်။ အစိုးရကအောက်ပါအချက်များကိုသက်သေပြနိုင်သောအခါမှသာလျှင် အပြစ်ပေးခြင်းကိုပြလုပ်နို်င်သည်။ ယင်းတို့့မှာ
(ဂ)ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်နိုင်ချေသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဆက်စပ် မှုရှိနေခြင်း
National security in Myanmar law
Constitution Art 354 အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၅၄
Printing and Publishing Law Arts 8-10+12-14 ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်းဥပေးပုဒ်မ ၈ မှ ၁၀ ၊ ၁၂ မှ ၁၄
Telecommunications Law Arts 4, 75-76 ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၊ ရ၅ မှ ရ၆
Tagged with: Constitution, National security အမျိုးသားလုံခြုံရေး, Penal code ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ, Telecommunications Law ဆက်သွယ်ရေးပုဒ်မ
Repeal 66(d) to protect legal constitutionality, non-duplication and clarity — ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်၊ ပုံစံတူဥပဒေများထပ်မနေစေခြင်း နှင့် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ၆၆(ဃ) ကို အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းပါ။